Izizathu ezi-8 zokuba isiCwangciso sakho sokuHlawula ngokuCofa sisilele | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 6, 2015 Douglas Karr
Kule nyanga ku Umda weRadiyo yeWebhu, sihamba ngentlawulo ngokucwangcisa qhinga, sixoxa ngamatyala okusetyenziswa, kunye nokubonelela ngetoni yezibalo kunye nolwazi. Abathengisi bayaliqonda ixabiso elixabisekileyo elihlawulwa ngentengiso nganye enokuthi ifezekiswe ekwakheni ulwazi xa ungenalo igunya lokukhangela, ukufumana izikhokelo, kunye nokuthimba abaphulaphuli abafanelekileyo abakulungeleyo ukuthenga ngokulandelayo.
Oko kwathethi, impendulo eqhelekileyo esiyivayo phakathi kwe-PPC skeptics yile:
Owu, sizamile i-PPC kwaye ayisebenzi.
Siye sinciphise kugxilwe kwinto inkcazo ye wazama kwaye iyaqhubeka nokufumana isiphoso kwizicwangciso ezazisetyenzisiwe. Ndiza kunyaniseka kuba andimbonanga umthengi omnye esilela ekusebenziseni umvuzo ngokokucofa xa amaphulo ejongwa, enziwe kakuhle, kuvavanywa kwaye kunikwa ingxelo ngokuchanekileyo. Nazi izizathu esibone ukuba iPPC iyasilela:
ukuzibophelela -Abathengi bafuna ukuvavanya amanzi nge-PPC kodwa abafuni kungena. Mhlawumbi bafuna nje ukwenza ikheshi eyi- $ 100 abayifumene ngeposi. Nokuba yeyiphi na indlela, uhlahlo-lwabiwo mali lokuqala lincinci kangangokuba abanako ngokwaneleyo ukuvavanya indibaniselwano yamagama aphambili, ngaphandle kwamagama angahambelaniyo, kunye nokufumana izikhokelo ezaneleyo zokuvelisa umbono wokuba amanqaku abo omgangatho ayaphucuka kwaye ngawaphi amagama aphambili okusetyenziswa. Utyalo-mali lwakho lokuqala kufuneka lube nkulu ngakumbi kunenkcitho yakho ekulindelwe ngenyanga kwi-PPC ukuvavanya, ukulinganisa, ukuphucula kunye nokuseta okulindelweyo kwiindleko zakho ngokukhokela, kumgangatho okhokelayo kunye nexabiso lokuguqula. I-PPC ayilo phulo elinye okanye iprojekthi, yinkqubo enokuphuculwa ngokuhamba kwexesha kwaye ifuna ulawulo ngabasebenzi abaqeqeshiweyo.
Akukho Maphepha okufika -Ukuba ndicofa intengiso ye-PPC kwaye indizisa kwiphepha lasekhaya, ndiqengqa amehlo am kwangoko. Iphepha lakho lasekhaya liyimephu yomxholo wakho kodwa xa ndenza uphando lwam ndikunike amagama aphambili kunye nale nto bendiyifuna. Kuya kufuneka unamakhulu, ukuba ayingangamakhulu, amaphepha okufika ajolise ngokwamagama aphambili ojolise kuwo!
Iinketho zokuguqula -Anguye wonke umntu ofuna ukuthenga kwi-PPC. Abanye basekuqaleni kwinkqubo yabo yokwenza izigqibo kwaye bafuna ukwenza uphando. Ukubonelela ngeendlela zokurhuma, ukhuphele iphepha elimhlophe, ubhalisele umboniso, okanye ezinye iindlela kuko konke ukuguqula okunokuqhuba umsebenzisi wokhangelo kutyelelo oluzibandakanye ngakumbi. Kwaye ngenxa yokuba bengakhange babhalise oko akuthethi ukuba abayi kuya kufuneka ugcine umkhondo wezinye izinto ezikhokelela kuguquko. Ngaba uyazi ukuba bangaphi abathengi bakho abaqala ngokukhuphela iphepha elimhlophe? Okanye umrhumo we-imeyile? Fumanisa ukuze ukwazi ukwenza ezinye zezo zinikezelo kwiphulo lakho le-PPC.
Ukulandelela umkhankaso ongalunganga -Ndisoloko ndimangalisiwe xa iinkampani zinephepha elinye lokufika elivulekileyo kuzo zombini i-organic kunye ne-traffic ehlawulelweyo, kodwa abanalo umkhankaso wokulandela umkhondo ukwahlula abo babini kubahlalutyi. Ngamanye amagama, i-PPC isenokuba sisicwangciso esiliqili- abanakuyixela ngokujonga eyabo kubahlalutyi. Fumana iarhente yokunceda ukumisela eyakho kubahlalutyi ngokufanelekileyo ukuze ukwazi ukulinganisa ngokuchanekileyo impumelelo yamaphulo akho.
Akukho Tracking yefowuni - Lonke ishishini kufuneka libenalo Ulandelelwaniso-oluhlangeneyo lokulandela umkhondo kwindawo yabo. Njengoko ilizwe lihamba ngeselula, baya besanda abantu abatsiba ukubukela ividiyo okanye abafunda iphepha elimhlophe kwaye bacofa nje inombolo yefowuni. Sinabaxhasi abathi ngokungachananga bathathe inxaxheba kwimizamo yabo yokuthengisa kunye neempawu zonke zeefowuni kwimithombo yeendaba zemveli ezinje ngomabonwakude nonomathotholo. Ngelixa la macandelo EYAqhuba iminxeba, siyazi ukuba amaphulo abo okucofa ahlawulelweyo nawo afanele ukufumana ikhredithi kuninzi lwefowuni yabo kodwa asinakulinganisa de babe batyale isisombululo.
Akukho Vavanyo -Ukuncamathela kwiphepha lokufika nje akonelanga. Umbala weqhosha okanye ulwalathiso lwamehlo lomntu kumfanekiso wefoto yesitokhwe unokuchaphazela izinga lokuguqula iphepha lokufika. Ukuvavanywa kwephepha lokufika yinto ebalulekileyo kuyo yonke intlawulo ngomkhankaso wokucofa. Kuya kufuneka ukuba uvavanye zonke izinto ukuze ulungiselele i-CTR kunye ne-ROI ngokubanzi yamaphulo akho ahlawulelweyo.
Umxholo ongalunganga Amanqaku omgangatho abandakanya umgangatho womxholo kwiphepha lakho lokufika kunye nokuguqulwa kuchaphazeleka ngokupheleleyo ngumgangatho wolwazi kwindawo yakho yonke. Amanqaku eembumbulu ezimbalwa akazukuyisika. Iividiyo, ubungqina, iimeko zokusebenzisa, idatha exhasayo, iilogo zabaxhasi, ifoto yabasebenzi… umxholo wakho kufuneka unyanzelise ngokwaneleyo ukuba undwendwe luzithembe ukuba lunokufumana ulwazi oluyidingayo xa luzalisa ifom yakho.
Ukungabikho kweNjongo Kutshanje besinethemba lokungena kwaye sonwabe ngokwenene ukuba uchaze iinjongo-wayefuna i-7: 1 ibuye kwimikhankaso yakhe yokukhangela ehlawulelweyo. Ukuqonda injongo, inqanaba lokuguqula, kunye nexesha eliqhelekileyo lokuguqula kunceda iarhente ye-PPC yakho ukuba iqonde uhlobo lwemfuno ekufuneka beyenzile, imali ekufuneka bechithe isikhokelo ngasinye, kunye nobude bexesha ezo zikhokelo ziya kuthatha ukuguqula. Bazokwazi ukuhlengahlengisa iphulo lakho ngokufanelekileyo kwaye bancede ekuboneni uhlahlo-lwabiwo mali lwempumelelo.
Enkosi kuErin at Amaqhinga eSiza Ukuxoxa ngezinye zeengcebiso-qiniseka ukuba uyangena Umda weRadiyo yeWebhu kwaye usimamele kuStitcher, iBlogTalkRadio, iTunes, IntengisoPodcasts okanye nawaphi na amanye amajelo osasazo lwePodcast!
tags: Irediyo yewebhuerin iintlantsimaphephaUhlahlo-lwabiwo mali lokukhangela oluhlawulelweyoiphepha lokukhangela elihlawulelweyoHlawula ngokucofa kanyePPCUhlahlo-lwabiwo mali lwepkciphepha lokufika kwepcIindlela zesiza
Ulahla njani loo nto yePasky -2 yokuNikwa iiSlugs zeWordPress